Uummatni keenyaa Amma yoomitti Dhumaa? – Kichuu
HomeNewsAfricaUummatni keenyaa Amma yoomitti Dhumaa?
Anaaf OPDOn akkuma muka dheertuu sana diinni akka sanyii ishee Uummata Oromoo balleessituuf jalqabaa kaastee waan karoorfatte dha. Bara Wayyaanee Waggaa 27 darban kana meeshaa tahe qabeenya Oromiyaa akka TPLF xuxxuu fi dhiigni ilmaan Oromoo Bahaa amma Dhihaa Kaabaa amma Kibbaa akka lolaa gannaa dhangala’ u gochaa kan ture OPDO dha. Yaroo Uummatni keenya qabsoo wal irra hin cinnee TPLF irratti gochaa ture kadhannaan koo guddaan OPDOn Uummata keenyaa fi TPLF jidduuti akka baatu ture. Yoo OPDOn hin jiraanne TPLF lubbuu dheeraa akka hin qabaanne hunda keenyaafuu ifaa natti fakkaata.
Haalli qabatamaan ragaan kana fakkaatee utuu jiruu maaliif Qabsoon Uummata Oromoo ABO, WBO, Qeerroo Bilisummaa Oromoon dursamee fi Uummata Oromoon utubamee Oromiyaa guutuu keessatti finiinee diina duraa humna Wayyaanee jilbeefachiisaa jiru injifannoo isaa barruu OPDO harka kaa’ee kan dhaabbatee ilaaluu Filate? Qabsson Qeerroo Bilisummaa Oromoon godhamaa ture biyya lafaa duratti dinqisiisamuu isaa caalaa uummata karaa nagaa qabsoo godhu hundaaf kan fakeenya tahu jedhamee hubatamaa ture. Akka galma isaa hin geenyeef burjaaja’uu fi dongorri maaliif isa qabate? Wareegamni qaaliin itti bahee jira. Qaqqallii kumaatama itti dhabnee jirra. Maalif qabsoon dhiiga kumaatamaan itti dhangalaafne milkii dhabee OPDO jidduu ummata keenyaa fi TPLFf baasuu dhiisee olaantummaa OPDO ol baasee argame? Suuta suuta OPDOn TPLF gara golaatti achi dhiibaa afaan dhadhaa dibatee Qeerroon keenyaa fi uummata keenya wajjin qabsoofne jijjirama fidaa jirra jechaa amma qabsoo Uummata Oromoo dhunfatu teenyee eegne? Waan uummatni Oromoo maraa beeku deddeebisanii sobuun waan dhugaa tahuuf itti fakkaata.
Akka Saba Oromoo itti jabinaa fi laafina keenya utuu gadi fageesine angoollollee of ilaallee bareeda natti fakkaata. Qeerroon Bilisummaa Oromoo murannoo fi onnee guutuu haa qabaatan malee muxxannoo shira warra Habashaa waan beekan natti hin fakkaatu .Akka Oromoo itti hundi keenya namni Oromoo tahe waan sobee nu gowwomsu nutti hin fakkatu. Nama keenyaa taanan shakkii tokko malee morma keenya kenuuf feena. Dadhabbii guddaa dha. Namni keenya Habshaa jala oolee hattuu fi sobduu tahee jira. Obboleessaa fi obboleetti isaa gurguree/gurgurattee jiraanya foyyeefachuu warri filatu xiqqaa miti. Kanatu moogolee nu buusaa jira.
Uummatni Orommo maaliif warra gadadoo kana mataa isaa irratti baatee akka taa’uuf naa hin galu. OPDOn maqaa saba keenyaa waamuun qaanii guddaa dha. Dheengada immoo Balee Gobaa keessatti Uummatni Oromoo goota isaa tokkoo sidaa daabbachuuf jennaan harcaatuun nafxanaa uummata keenya rasaasan akkoofti. “Yoo abba tufattan saree abbaa jalatti dhaannu”, jedhan. Warra maqaaf Oromoo himatee suusiin Itoophiyaa isaan rakkisuu fi warra akeeka Miniliki bakkaan gaheef deemtuu uummata keenya balaaf saaxilaa jira. Utuu oollee hin bullee humna keenya walitti ittichinee diina nutti marsaa jiru yaroon of irraa faccisuu qabna. Kanaaf ammas Qeerroon Bilisummaa Oromoo ummata keenya gurmeessuuf dirqama seenaa qaba.